Firefox ရဲ့ Page loading ကိုပိုမြန်အောင်လုပ်ကြမယ် ~ နေမင်းမောင် ( နည်းပညာ )
Home » Internet Tools , Tips And Tricks » Firefox ရဲ့ Page loading ကိုပိုမြန်အောင်လုပ်ကြမယ်
Firefox ရဲ့ Page loading ကိုပိုမြန်အောင်လုပ်ကြမယ်
By နေမင်းမောင်9:05 PMNo comments
Firefox ရဲ့ Page Loading ကို ပိုမြန်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်း ( ၅ ) ခု
၁။ Pipelining ကို Enable ပြုလုပ်ခြင်း
ဒါကတော့ Friefox version တွေ အကုန်လုံးအတွက် အခြေခံကျတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုပါ။ Firefox ရဲ့ address bar ထဲမှာ about:config လို့ရိုက် Enter ခေါက်လိုက်ပါ... သတိပေးတဲ့ message ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ I'll be careful, I proxise! ဆိုတာကို click ပါ။ ပြီးရင် network.http.pipelining နဲ့ network.http.proxy.pipelining ဆိုတာတွေကို လိုက်ရှာပါ။ မတွေ့ရင် အပေါ်က Filter ထဲမှာ ရိုက်ပြီး ရှာလိုက်ရင်လည်း ရပါတယ်။ တွေ့ပြီးဆိုရင် ၄င်းတို့ပေါ်မှာ double click လုပ်ပြီး values တွေကို true လို့ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင် network.http.pipelining.maxrequests ပေါ်မှာ double click လုပ်ပြီးရင် ၄င်းရဲ့ value ကို 8 လို့ပေးလိုက်ပါ။
၂။ Content switch threshold ကို လျှော့ချခြင်း
အကယ်၍ သင့်ရဲ့ mouse (သို့) keyboard ကို မရွှေ့ မထိပဲ 0.75 စက္ကန့် (Content Switch Threshold ) ကြာခဲ့မယ်ဆိုရင် Firefox ဟာ frequency နိမ့်တဲ့ interrupt mode ထဲကို ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဆိုလိုတာကတော့ ၄င်းရဲ့ ကြားခံဆက်သွယ်ပေးတဲ့စနစ်ဟာ တုန့်ပြန်မှုနည်းလာပါလိမ့်မယ်...ဒါပေမယ့် သင့်ရဲ့ page loadတွေကတော့ ပိုပြီးမြန်ဆန်လာမှဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခုလိုပိုပြီးမြန်ဆန်လာစေဖို့ Content Switch Threshold ကို လျှော့ချပေးဖို့လိုပါတယ်။ about:config ကိုရိုက် Enter ခေါက် ပြီးရင် ပွင့်လာတဲ့ windows ပေါ်မှာ right-click လုပ်၊ ပြီးရင် New ထဲကမှာ Integer ကို click ၊ အဲဒီနောက် content.switch.threshold လို့ရိုက် OK ပေး ပြီးရင် 250000 (aquarter ofasecond ) ကိုထည့် OK ပေးလိုက်... ဒါဆိုရပါပြီ။
၃။ Flash ကို Block ခြင်း
Flashblock extension ကို Install လုပ်ဖို့လိုက်ပါ။ ( http://flashblock.mozdev.org တွင် download ပြုလုပ်ပါ။) ၄င်းက Flash appletတွေ အားလုံးကို loading ပြုလုပ်ခြင်းမှာ block လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် web pages တွေဟာ ပိုပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန် ဖော်ပြပေးပါလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ Flash content အချို့ ကို ရှာဖွေချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ၄င်းရဲ့ Placeholder ကို download အတွက် click လိုက်ခြင်းအားဖြင့် ပုံမှန်အတိုင်း applet ကို ပြသပေးပါလိမ့်မယ်။
၄။ cache အရွယ်အစားကို တိုးစေခြင်း
သင် web တစ်ခုကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်စဉ်မှာ Firefox က site ရဲ့ images နဲ့ scriptတွေ ကို local memory cache တစ်ခုထဲမှာ သိမ်းဆည်းထားလိုက်ပြီး အကယ်၍ သင်က တူညီတဲ့ page တစ်ခုကို ပြန်ပြီးဖွင့်မယ်ဆိုရင် locak memory cache ကနေ သိမ်းထားတဲ့ အချက်အလက်တွေကို ပိုပြီး မြန်မြန်ဆန်ဆန် ပြန်ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သင့်မှာ RAM အများကြီး( 2GB နဲ့အထက် ) ရှိတယ်ဆိုရင် ဖွင့်ပြီးသား page တစ်ခုကို ပြန်ဖွင့်တိုင်းမှာ မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖွင့်လို့ရစေဖို့အတွက် cache size ကို တိုးထားသင့်ပါတယ်။ ဒီ့အတွက် about:config လို့ရိုက် Enter နှိပ် ပြီးရင် ပွင့်လာတဲ့ window ထဲက ဘယ်နေရာမှာမဆို right-click ပြီးရင် New ထဲက Integer ကိုသွားပါ။ အဲဒီထဲမှာ browser.cache.memory.capacity လို့ရိုက် OK ပေး၊ ပြီးရင် ၄င်းပေါ်မှာ double-click လုပ်၊ value ကို 65536 လို့ရိုက် OK ပေး၊ အဲဒီနောက် သင့်ရဲ့ browser ကို restart ပေးလိုက်ပါ။
၅။ Render မြန်စေခြင်း
ကြီးမားပြီး ရှုပ်ထွေးတဲ့ web pageတွေကို ဖွင့်တဲ့ အခါမှာ အချိန်တော်တော်ကြာတတ်ပါတယ်။ Firefox က သင့်ကို မစောင့်စေချင်ပါဘူး ... ဒါကြောင့် 0.12 စက္ကန့်တိုင်းမှာ ရရှိတဲ့အချက်အလက်တွေ(content notify interval)ကို default အားဖြင့်ဖော်ပြပေးပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်တွေမှာ browser ဟာ တဖြည်းဖြည်း ဖျက်ကနဲ့ ဖျက်ကနဲ ဖော်ပြပေးပြီး တိုးလာတဲ့ စုစုပေါင်း page loading လုပ်တဲ့ အချိန်ကိုလည်း မကြာမကြာလျော့ကျစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကြီးမားတဲ့ content notify interval ဟာ ပိုပြီး မြန်ဆန်စေပါလိမ့်မယ်။ ဒီ့အတွက်... about:config ကိုရိုက်၊ Enter နှိပ်၊ ပြီးရင် ပွင့်လာတဲ့ Window ရဲ့ တနေရာရာမှာ right-click ( Apple userတွေအတွက်က ctrl-click)လုပ်၊ New ထဲက Integer ကို click ပြီး preference name ကို content.notify.interval လို့ရိုက် OK ပေး ပြီးတော့ 500000 ( ငါးသိန်း) လို့ရိုက်ထည့် ပြီးရင် OK ထပ်ပေးပါ။
Window ထဲမှာ right-click ထပ်လုပ်ပါ။ ပြီးရင် New ထဲက Boolen ကို click ပါ။ ဒီတကြိမ်မှာတော့ content.notify.ontimer ဆိုတဲ့ value တစ်ခုပြုလုပ်ပြီး True ပေးလိုက်ပါ။ ဒါဆိုပြီး ပါပြီ။
အသုံးဝင်မယ်ထင်လို့ မောင်စေတနာ ဆီမှပြန်လည်မျှဝေဖော်ပြပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ..
Best 80 Desktop Themes For Windows 7
Internet Download Manager 6.05 Build2+ Crack
Revo Uninstaller Pro 2.4.0 Preactivated Software
မိမိရဲ့ဘလော့မှာ MP3Player လေးထည့်ချင်သူတွေအတွက်...
Mirillis Splash PRO HD Player 1.5.0 Multilanguage
Windows7အကြောင်းလေ့လာကြမယ်နော်......
Avast! Free Antivirus 6.0.989 Beta / 5.1.889
Internet Download Manager v6.03 Beta Bulid 14 Full...
World Cup 2010 Theme for Windows 7
Windows7wallpapaer လေးတွေပါ......
ဘလော့ရဲ့ Favicon လေးတွေပြောင်းကြည့်ကြမယ်နော်.....
Google Toolbar လေးပါ..........
မဖတ်ရသေးတဲ့ Gmail ကို nick မဖွင့်ပဲ သိရအောင်
Run Box မှ မိမိနှစ်သက်ရာ ဖိုင်/ ဖိုဒါများကို ဖွင့်...
Google Home Page မှာနောက်ခံ Background လေးထည့်ကြမယ...
3D Destop လေးပါ......
G-talk ကို KeyBoard လေးနဲ့လွယ်ကူစွာအသုံးပြုချင်သူမ...
Checking Your Hard Disk for Error
Run Box မှာရိုက်ထားတဲ့ command တွေကိုရွေးဖျက်ကြရအေ...
Software တွေရဲ့ Series Code တွေကိုအတိအကျရှာ ကြရအေ...
အလွယ်တကူနဲ့ Folder တွေ File တွေဖျောက်ကြမယ်နော်......
မိမိရဲ့ Facebook လေးမှာလန်းလန်းလေးသုံးကြမယ်နော်
စိ​တ်​၀င်စား​သူေ​တွ​အတွ​က် Firefox add-onေ​လး...
အသုံးဝင်မဲ့ Run စာသားလေးတွေပါ
Destop X ဆော့ဝဲလေးပါ
ကဲ windows themes အလ​န်းေ​လးေ​နာ်
ကိုယ့်ရဲ့ Gmail ထဲမှာ English - Myanmar Dictionar...
NOTORN ANTIVIRUS 2009
မိမိကွန်ပျူတာ Destop ကိုအလှဆင်ချင်သူများအတွက်
Metric Clock ဆော့ဝဲလေးပါ
Run Short Cut